Team Introduction: Episode(1) – Venus Vixens MLBB Team – Gaming Noodle
Gaming Noodle ရဲ့ Esports အသင်း မိတ်ဆက် အစီအစဉ်ရဲ့ Episode(1) ကိုပါဝင် အားဖြည့်ပေးမှာကတော့ Venus Vixens မိန်းကလေး MLBB အသင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Venus Vixens အသင်းဟာ မကြာသေးခင်က ကျင်းပခဲ့တဲ့ Female Esports League Mobile Legends ပြိုင်ပွဲရဲ့ Myanmar Qualifier မှာ ပထမရှိပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ကိုယ်စားပြုအနေနဲ့ စင်ကာပူနိုင်ငံမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရတော့မှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒာဟာ ကျွန်တော်တို့ သိသလောက်ဆိုရင် WESG 2018 Asia Qualifier အတွက် မလေးရှားမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ “Team Fairy” ပြီးရင် ဒါဟာ မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုပြီး နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ဒုတိယမြောက် အမျိုးသမီး Esports အသင်းဖြစ်ပြီး Mobile Esports အသင်းတစ်သင်း အနေနဲ့ဆို ပထမဆုံးလို့ ယူဆနိုင်ပါတယ်။
ထူးခြားတာတစ်ခုက Venus Vixens ဟာ သူငယ်ချင်းတွေ အချင်းချင်းစုဖွဲ့ထားတဲ့ အသင်းတစ်သင်းမဟုတ်ပာဘူး။Female Sports League အနေနဲ့ ပြိုင်ပွဲဝင်ပြိုင်ဖို့ အသင်းမရှိပဲ Register လုပ်တဲ့ Solo Player တွေကို အသင်းအနေနဲ့ ပြန်လည် စုစည်းပေးရာကနေ Mythic Rank ချင်းတူတူမလို့ ပေါင်းစည်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ အသင်းတစ်သင်းသာ ဖြစ်ပါတယ်။ Player တွေ အားလုံးရဲ့ နေရပ်တွေကလည်း မတူညီပဲ ပဲခူး၊ မန္တလေး နဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မှာ နေထိုင်သူ တစ်ဦးစီ ပါဝင်နေပြီး ရန်ကုန်မှာ နေထိုင်သူ ၃ ဦးပါရှိပါတယ်။
အပြင်မှာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးတဲ့ Member တွေ ဖြစ်တဲ့ အပြင် လေ့ကျင့်ချိန် အနည်းငယ်သာ ရရှိခဲ့ပေမယ့်လည်း ယခုလို Champion ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Venus Vixens MLBB အသင်းက Player တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ အကြောင်းအရာလေးတွေကို အောက်မှာ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
လာမယ့် ဇွန်လ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက် စင်ကာပူမှာ ယှဉ်ပြိုင်ရမယ့် Main Event မှာလည်း ဖိလစ်ပိုင်၊ အင်ဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှား/စင်ကာပူ အသင်းတွေကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အောင်မြင်မှု ရရှိနိုင်စေဖို့လည်း GamingNoodle မှ ဆုတောင်း ပေးလိုက်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
Gaming Noodle ရဲ့ Esports အသငျး မိတျဆကျ အစီအစဉျရဲ့ Episode(1) ကိုပါဝငျ အားဖွညျ့ပေးမှာကတော့ Venus Vixens မိနျးကလေး MLBB အသငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။
Venus Vixens အသငျးဟာ မကွာသေးခငျက ကငျြးပခဲ့တဲ့ Female Esports League Mobile Legends ပွိုငျပှဲရဲ့ Myanmar Qualifier မှာ ပထမရှိပွီး မွနျမာနိုငျငံ ကိုယျစားပွုအနနေဲ့ စငျကာပူနိုငျငံမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျရတော့မှာပဲ ဖွဈပါတယျ။
ဒာဟာ ကြှနျတျောတို့ သိသလောကျဆိုရငျ WESG 2018 Asia Qualifier အတှကျ မလေးရှားမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျခဲ့တဲ့ “Team Fairy” ပွီးရငျ ဒါဟာ မွနျမာနိုငျငံကို ကိုယျစားပွုပွီး နိုငျငံရပျခွားမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျမယျ့ ဒုတိယမွောကျ အမြိုးသမီး Esports အသငျးဖွဈပွီး Mobile Esports အသငျးတဈသငျး အနနေဲ့ဆို ပထမဆုံးလို့ ယူဆနိုငျပါတယျ။
ထူးခွားတာတဈခုက Venus Vixens ဟာ သူငယျခငျြးတှေ အခငျြးခငျြးစုဖှဲ့ထားတဲ့ အသငျးတဈသငျးမဟုတျပာဘူး။Female Sports League အနနေဲ့ ပွိုငျပှဲဝငျပွိုငျဖို့ အသငျးမရှိပဲ Register လုပျတဲ့ Solo Player တှကေို အသငျးအနနေဲ့ ပွနျလညျ စုစညျးပေးရာကနေ Mythic Rank ခငျြးတူတူမလို့ ပေါငျးစညျးဖွဈခဲ့တဲ့ အသငျးတဈသငျးသာ ဖွဈပါတယျ။ Player တှေ အားလုံးရဲ့ နရေပျတှကေလညျး မတူညီပဲ ပဲခူး၊ မန်တလေး နဲ့ ကခငျြပွညျနယျ မှာ နထေိုငျသူ တဈဦးစီ ပါဝငျနပွေီး ရနျကုနျမှာ နထေိုငျသူ ၃ ဦးပါရှိပါတယျ။
အပွငျမှာ တဈခါမှ မမွငျဖူးတဲ့ Member တှေ ဖွဈတဲ့ အပွငျ လကေ့ငျြ့ခြိနျ အနညျးငယျသာ ရရှိခဲ့ပမေယျ့လညျး ယခုလို Champion ဆုရရှိခဲ့တဲ့ Venus Vixens MLBB အသငျးက Player တဈယောကျခငျြးစီရဲ့ အကွောငျးအရာလေးတှကေို အောကျမှာ ကွညျ့ရှုနိုငျပါတယျခငျဗြာ။
လာမယျ့ ဇှနျလ ၈ ရကျနဲ့ ၉ ရကျ စငျကာပူမှာ ယှဉျပွိုငျရမယျ့ Main Event မှာလညျး ဖိလဈပိုငျ၊ အငျဒိုနီးရှားနဲ့ မလေးရှား/စငျကာပူ အသငျးတှကေို ကြျောဖွတျပွီး အောငျမွငျမှု ရရှိနိုငျစဖေို့လညျး GamingNoodle မှ ဆုတောငျး ပေးလိုကျပါတယျ ခငျဗြာ။
This is the first episode of Gaming Noodle’s “Team Introduction” program and our featured team is “Venus Vixens” Female Mobile Legends Team.
Venus Vixens just won championship at Female Sports League (FSL) MLBB Tournament and they are going to represent Myanmar in Main Evenr at Singapore.
As our knowledge, this is the second all-female esports team representing Myanmar at International stage after Team Fairy which competed in WESG 2018 Asia Qualifier in Malaysia. For mobile esports, Venus Vixens is the first female esporta team to represent Myanmar at LAN tournament.
The best thing about Venus Vixens is all players do not have their own team and they all registered as solo players for FSL MLBB tournament. FSL admins helped them to formedateam. They all even live in different states of Myanmar. Three live in Yangon while the rest of them are from Bago, Mandalay & Kachin respectively.
Even though all players have not met each other in real life and they only had limited training time, they tried so hard to get the championship.
Venus Vixens will play with qualifying teams from Philippines, Indonesia and Malaysia/Singapore in June 8th and 9th at Singapore. GamingNoodle wishes all members to perform their best at main event and make our country proud at International stage.
You can check full profile of each players below.